Pnpkhabar.com | Nepali Online News, Videos & Entertainment आज सुनको मूल्य बढ्यो, कारोबार कतिमा ? - Pnpkhabar.com
आज सुनको मूल्य बढ्यो, कारोबार कतिमा ?
काठमाडौं, १७ पुस : शुक्रबार सुनको मूल्य तोलामा ४ सय रुपैयाँले बढेको छ । सुनको मूल्य तोलामा ९४ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा ९४ हजार एक सय रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
यो साताको पहिलो दिन आइतबार सुन तोलाको ९४ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । सोमबार सात सय रुपैयाँ बढेर ९४ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन मंगलबार फेरि आठ सय रुपैयाँ नै घटेर ९४ हजार एक सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । बुधबार तोलामा १ सय रुपैयाँ बढेको सुनको मूल्य बिहीबार तोलामा १ सय रुपैयाँ नै घटेको थियो ।
त्यस्तै शुक्रबार तेजावी सुनको मुल्य प्रतितोला ९४ हजार रहेको छ । चाँदीको मूल्य भने शुक्रबार घटबढ भएको छैन । चाँदी शुक्रबार पनि बिहीबार जस्तै तोलामा एक हजार तीन सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासङ्घले जनाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घटबढ हुँदा नेपालमा पनि यसको असर पर्ने गरेको छ ।
नेपालमा अनुमति पायो, कोरोनाविरुद्ध ‘कोभिशिल्ड’ खोपले
संसद विघटन गर्ने मन्त्रिपरिषदको सक्कल फाइल वेञ्चमै नपुगी फिर्ता भएकोमा अधिवक्ता श्रेष्ठद्वारा आपत्ति
सक्रिय संक्रमितमध्ये १६५ जना आईसीयूमा र ३८ जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत
भारत-नेपाल पेट्रोलियम पाइप लाइनबाटै डिजल चोरी